महाधिवेशनले एकताबद्ध एमालेको सन्देश दिनेछ ; अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले :: नेपालबोट समाचारदाता :: Nepal Bot
सोमबार, मंसिर ६, २०७८ नेपालबोट समाचारदाता
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य १०औं महाधिवेशनबाट एकताबद्ध एमालेको सन्देश दिने बताउनुहुन्छ । नेतृत्वले फराकिलो मनका साथ उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । गुट, फुट र विभाजनको पक्षमा जनता र कार्यकर्ता नरहेको उहाँले बताउनुभयो । अब ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पूरा गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो । महाधिवेशनबाट यही सोचसहितको नेतृत्व छनौट भएर आउनेमा आशावादी रहेको बताउनुहुन्छ । शाक्यसँग महाधिवेशनको तयारीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
बागमती प्रदेशको पूर्व–मुख्यमन्त्री तथा पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यो पटक तपाईंरुले फरक खालको सन्देश दिन महाधिवेशन अघि नै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ । यो
विषयमा थप बताइदिनुहोस् न ?
महाधिवेशनमा सबैले आ–आफ्नो चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । यद्यपी, मेरो भन्दा पनि आजको आवश्यकता के ? पार्टीको आवश्यकता के ? देशको आवश्यकता के ? कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी हाँक्ने ? भन्ने ठानेर वा सोचेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
यसका लागि सबै भन्दा पहिला नेतृत्व एक मना एकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अपेक्षा धेरैको र पद थोरै हुँदा व्यवस्थापन गर्दा सबैलाई भाग पुग्न नसक्ला यो विषयलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ र पद नपाउनेले पनि आफूलाई असतुष्ट बनाएर देश, पार्टी र जनताका हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्नुपर्छ । गौरवशाली, ठूलो र जनमत भएको पार्टीको सदस्य भएर बस्न पनि गौरव ठान्नुपर्छ । अहिले कमरेड केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले मन फराकिलो बनाएर कुसल ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उहाँले यसो गर्नुभयो भने एमाले थप शक्तिशाली र शसक्त भएर अघि बढ्ने कुरामा दुईमत छैन । उहाँले खुलस्त रुपमा सबैको मनोभावनालाई बुझ्दै उचित व्यवस्थापन गर्नुहोला भन्ने मैले ठानेको छु ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ६, २०७८ ०१:११